Rafitra fanatsarana kalitao - Xiamen Kinghow Outdoor Product Co., Ltd.
Ny fitakiana kalitao
Izahay dia afaka mifehy tsara ny fepetra takianao amin'ny kalitao. Efa an-taona maro no teny an-tsena isika miaraka amin'ny rafitra efa napetraka sy ankatoavina nefa manatsara hatrany ny fenitra arahinay izahay mba hahatratrarana ny andrasan'ny mpanjifantsika raha ny kalitaon'ny vokatra no resahina.
Noho izany dia azo ampifaninanana amin'ireo marika iraisam-pirenena toy ny TOV, CSCV, SGS, TUV ary ny azy sns ny kitaponay.
OEM dia manolo-tena amin'ny filan'ny mpividy ary miantoka ny kalitaon'ny vokatray izahay. Ny fahafaham-ponao no laharam-pahamehanay. Raha mahita ianao fa tsy afa-po dia manome anao ny famerenanana ny vokatra na hamerina ny volanao.
Mikarakara ny fifehezana avy amin'ny mpamatsy ka hatramin'ny famindrana
Ny olan'ny fitokisana dia resahina amin'ny zavatra niainantsika
Mora ny milefitra amin'ny fifehezana kalitao any Shina. Tsy dia mangarahara loatra ny raharaha eto satria orinasa maro no manisy kolikoly ny fifehezana ny kalitaon'ny antoko faha-3. Mba hisorohana an'izany, nanakarama ny ekipanay izahay QC ary miasa irery izy ireo nefa tsy misy fanelingelenana avy amin'ny orinasa. OEM dia nanao izay hahazoana antoka fa manao ny asany am-pahamarinana izy ireo amin'ny fanarahana fitsipika henjana ho azy ireo izay tsy mamela azy ireo hanome amin'ny fakampanahy hahazo vola fanampiny.
Fanaraha-maso ny famokarana avy amin'ireo mpamatsy hatramin'ny famoahana
Amin'ny kalitao dia tsy vitan'ny hoe kalitaon'ny famokarana fotsiny, fa ao koa ny fanaraha-maso ny famatsiana alohan'ny hanombohantsika ny famokarana betsaka. Ankoatr'izay, adidintsika ihany koa ny mampiditra am-pitandremana ireo fonosana farany ao anaty kaontenera mba hanaterana soa aman-tsara eo am-baravaranao. Noho izany, ny manampahaizana QC anay dia mijery hatrany ny fizotrany rehetra hatrany am-piandohana ka hatramin'ny famoahana azy.
Dingana samihafa amin'ny fizotran'ny QC
Ny asan'izy ireo dia ny fahatakarana ny zavatra takinao sy ny fampitana ny antsipiriany rehetra amin'ny teny sinoa amin'ny efitrano santionany. Izy ireo koa dia liana amin'ny vidiny ary manantena ny haavon'ny kalitao amin'ny fanolorana fanatsarana vitsivitsy amin'ny efitrano santionany.
Ny teknisianina ao amin'ny efitrano fakan-tahaka dia mandany fotoana betsaka amin'ny filanao sy ny masontsivana mba hanomezana anao ny vidiny mety indrindra izay hanampy anao hahatratra ny vidinao lasibatra. Mandritra ny santionany dia atsangana ihany koa ny lisitry ny hevitra ara-teknika ho an'ny famokarana betsaka.
Fivorian'ny fivorian'ny orinasa
Ity no fivoriana famokarana mialoha izay misy ireo teknisianina, varotra ary QC rehetra izay ao anatin'ny tetikasanao. Ny antsipiriany rehetra momba ny tetikasanao dia resahina, izany hoe ny fomba famokarana be pitsiny, ny isa tsara ary ny antsipirian'ny fonosana.